ALOHA ọzọ ndị ọbịa si Canada, Korea, Taiwan
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » ALOHA ọzọ ndị ọbịa si Canada, Korea, Taiwan
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Mgbasa Ozi Hawaii • Akụkọ Ahụike • HITA • News • Safety • Akụkọ South Korea na -agbasa • Akụkọ na -agbasa Taiwan • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Steti nke Hawaii re-ẹkenam njem na October 15 site n'ikwe ka ndị America ibe ha na US Chile banye na Aloha State na-enweghị na-aga site a 14-ụbọchị kwarantaini tupu ha enwee ike na-acha ọcha aja efu osimiri, na-eme ụfọdụ shopping, na-enwe ọtụtụ ewu ụlọ oriri na ọ withoutụ withoutụ na-enweghị ihe ọ bụla e.
Tupu ọnwa a, Ndị ọbịa Japan wee nwee ike iji usoro nnwale tupu njem nke Hawaii. O di nwute na ndị ọbịa Japan ahụ na-ekpebi ezumike na Hawaii ga-echekwa iche iche ụbọchị 14 mgbe ha laghachiri.
John de Fries, Onye isi oche nke Ndị njem nleta Hawaii, gwara ndị isi obodo na Hawaii Island ụnyaahụ, nnukwu ọkwa ga-abịa n'oge na-adịghị anya ịnabata ndị ọbịa si Canada, Republic of Korea, na Taiwan.
Ọnọdụ COVID-19 na-adịgide adịgide ma e jiri ya tụnyere United States ndị ọzọ, mana ọtụtụ ahịa ahịa mba ụwa na-echegbu onwe ha banyere Hawaii ịbụ US State. Mgbasa nje a na mpaghara ndị ọzọ nke United States na-atụ egwu ma na ọnụ ọgụgụ kachasị elu ma e jiri ya tụnyere mpaghara ọ bụla n'ụwa. Uru dị na Hawaii bụ na njem dị n'etiti steeti na mba ndị ọzọ amachibidoro ule na-enweghị njem.
eTurboNews rutere Gọvanọ Ige, mana enwetaghị nkwenye ma ọ bụ nzaghachi n'aka ya.